The last one - သျှီ - Wattpad
2.6K Reads 198 Votes 29 Part Story
By BerryBerry649 Ongoing - Updated Aug 23
Normal Oc လေးပါ 😘
faတွေအားကျလို့ရအောင် roပေးထားတယ် 😪😪
Character မိတ်ဆက် 😍
Khoon Thit Nay 's character
#2 in normal See all rankings
12.1K 1.6K 689
လ​ရောင်​ဆမ်းမှ ဖူးပွင့်​ရတဲ့ ကြာပန်း​လေးဟာ ကန်​​ပေါ်မှာ မထင်​မရှား​ပေါ်​နေတဲ့ လရိပ်​​လေးကိုကြည့်​ပြီး လမင်းကြီးဟာ သူမအတွက်​ပဲလို့ သတ်​မှတ်​ထား​လေရဲ့...........
ဒါဆိုလမင်းကြီးက​ကော? ​ဘေးက​တောက်​ပလှတဲ့ အမျိုးစုံကြယ်​ပွင့်​​တွေထက်​ ​ရေပြင်​ထက်​က သူ့ကို​မျှော်​ကြည့်​​နေတဲ့ အညတရ ပန်းပွင့်​​လေးကို ​ရွေးပါ့မလား? သူ..... မြင်​နိုင်​ပါ့မလား.......?
797 72 59
4နာရီစာ ငှားရမ်းခဲ့တဲ့ အယောင်ဆောင် ချစ်သူ တစ်ယောက်ကို ချစ်သွားမိတဲ့အခါ....
Cover By @Gustzy
6.6K 980 60
"မိုး...တော်တော့ကွာ...မှားခဲ့တဲ့ ကိစ္စမှာ မင်းအခန်းထိ ရောက်လာတဲ့ ငါ့ဘက်က အမှား ပိုတာ သိပါတယ်...ဒါပေမဲ့ ဒီကိစ္စ ကို အကြောင်းပြ ပြီး မင်းကို အပိုင်ရဖို့ ကြိုးစားခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး..မင်း ကို တာဝန် လည်း မယူခိုင်းခဲ့ဘူး...မင်းကို ငါ ဘာများ တောင်းဆို ခဲ့လို့လည်း..."
"အဲဒါပဲလေ...မင်းရဲ့ ခပ်ပေါ့ပေါ့ အတွေးတွေလေ...မိန်းကလေး ဖြစ်တဲ့ မင်းက ဒီလောက် အတွေးအခေါ် ခေတ်မှီ နေဖို့ မလိုဘူးကွ....ပြီးတော့ စားပြီး နားမလည် တာဝန်မယူပဲ ထားရအောင် ငါက မင်းအမြဲ ပတ်သက်နေရတဲ့ ကောင်စားမျိုး တွေလို မဟုတ်ဘူး..မင်းရဲ့ အတွေးအခေါ် ကို ငါ သိသွားတာနဲ့ မင်းရဲ့ မိန်းကလေး တန်ဖိုးက ဇီးရိုးပဲကွာ.."
"ငါ့ဘ၀ကို ငါ ဘယ်တုန်းကမှ ပေါ့ပေါ့ မတွေးခဲ့ပါဘူး မိုး... အချစ်ကို မင်းသိတဲ့တစ်နေ့...ငါ့ကို နားလည်လာပါလိမ့်မယ်..."
23.8K 1.8K 70
"ငါ့ နှလုံးသားကို မကစားပါနဲ့ ဘုန်းမင်းရယ်.....
"ဟား..ဟား..ဒါဖြင့် မောင့်နှလုံးသားကို မ အပိုင်သိမ်းသွားတာကျတော့...
" အဖြေ တစ်ခုလိုနေရင်ပြောလိုက်မယ်..
နင့်ကို  မုန်းတယ် ဗီဂါ "
ကျွန်တော် က ချစ်လို့ ခင်ဗျားက မုန်းတယ်... ဟုတ်လား..
ဟား..ဟား...မုန်းစမ်း..သေအောင်မုန်းလိုက်စမ်း...အဲဒီ့ အမုန်းတွေနဲ့ဆတူ ပိုတိုးပြီး ချစ်ပြလိုက်မယ်...."
ယုံကြည်မှု ကို အလွဲသုံးစား လုပ်တာထက် အချစ်ကို ဆေးဆိုးပန်းရိုက် လုပ်ခဲ့တဲ့ မောင့် အပြစ်က ပိုကြီးတယ်...။
မ ရဲ့ အနားမှာ  မနက်ဖြန်တိုင်း
မောင် ရှိနေရမယ်  .. ဒါ မ ရဲ့ ကလဲ့စား တစ်ခု...။
မာနကြောင့် မပြောဖြစ်ခဲ့တဲ့ တောင်းပန်ခြင်းတွေရှိတယ်..
7K 420 132
ကြယ်​စင်​ နဲ့ အလင်း​ရောင်​ က
အချင်းချင်း သိရုံတင်​ သိခဲ့ကြတဲ့ သူပါ...
မိဘချင်း ခင်​မင်​ ရင်းနှီးကြလို့ပါ...
ကြယ်​စင်​ က အလင်း​ရောင်​ ကို ခိုးချစ်​ခဲ့တာ..
သူမ ရဲ့ အချစ်​ဦး​ပေါ့....
သို့​သော်​...သူတို့ နှစ်​​ယောက်​ ကံကြမ္မာ လှည့်​စားမှု​ကြောင့်​
ကံကြမ္မာ ရဲ့ ပြန်​လည်​ ကျီစားမှု တစ်​ခု~~
ကြယ်​စင်​နဲ့ အလင်း​ရောင်​ ကို
နှစ်​ဖက်​ မိဘ​တွေရဲ့....သ​ဘောတူညီမှု နဲ့
ဒါ​ပေမယ့်​ အလင်း​ရောင်​ မှာ ချစ်​​နေရတဲ့ သူ ရှိ​တော့~~~
"ကိုကိုရဲ့ လက်ထပ်ခွင့်" 💍💍
9.5K 505 7
သွန်းငွေရည် နဲ့ နေလင်းခန့်ဟာ ငယ်စဉ်တည်းက စေ့စပ်ထားခဲ့တဲ့သူတွေ ဖြစ်ကြတယ်...မောင်နှမလိုရော ချစ်သူတစ်ယောက်လိုပါ ချစ်ကြတဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာ ဘယ်လို အခက်အခဲတွေ ပြဿနာတွေ ရှိလာမလဲဆိုတာ....👉🏻👉🏻
10.3K 734 74
အသုံးအ​ဆောင်​ ပစ္စည်း တစ်​ခု...ပါ လို့
​မောင်​...မ ကို ​ရော ပစ္စည်း လို့ သတ်​မှတ်​ထား​လေ မလား~~~
မ စိုးရိမ်​ ​နေမိတယ်​...​မောင်​...
မ အသည်းကွဲမှာ ​ကြောက်​မိတယ်​...​မောင်​ရယ်​
မ...မ ရဲ့ အချစ်​စစ်​ အချစ်​မှန်​ ကို...
​မောင်​ ဘယ်​ချိန်​မှ ​တွေ့ခွင့်​ရမှာလဲ...
​မ ​မောင့်​အ​ပေါ်...ဘယ်​လို​တွေ ဘာ​တွေပဲ..
လုပ်​ခဲ့ လုပ်​ခဲ့...​မောင်​ ​မေ့နိုင်​တယ်​...
​မောင်​ မကို ချစ်​လို့~~~
သံစဉ် ချစ်သူ 🎼 (Completed)
သံစဉ်ဝိုင် ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးဟာ scholarship ရပြီးတော့ နိုင်ငံမှာ အကောင်းဆုံးနဲ့ ဈေးအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီး လူချမ်းသာတွေပဲ တက်နိုင်တဲ့ တက္ကသိုလ်မှာ စတင်တက်ရောက်ခဲ့ရပါတယ်...အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကင်းနန္ဒဆိုတဲ့ dancer ကောင်ချောချောလေးနဲ့တွေ့ပြီး ဘယ်လို romantic ဆန်ဆန်ဇာတ်လမ်းလေးတွေ စလာမလဲ ဆိုတာကတော့....
6.4K 470 5
နောက်တာပါလို့...😁 လူငယ်ဆန်ဆန် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးပဲ ရေးထားတာပါ...romantic ဆန်ဆန်လေးတွေလဲ ပါပါတယ်လို့...ဖတ်ကြည့်ပြီး အားပေးကြပါဦးနော် 😘😘
"အဖြူရောင် စည်း" 💘💘 (Completed)
4.4K 270 2
လအရိပ်ဟာ ငယ်စဉ်ကတည်းက မိဘတွေ ဆုံးပါးသွား၍ မိဘတွေရဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ လင်မယား နှစ်ယောက်က ပြန်လည်မွေးစားခဲ့တယ်...အဲ့ဒီ လင်မယားမှာလဲ လအရိပ်ထက်ကြီးတဲ့ နေလင်းခန့်ဆိုတဲ့ သားလေး တစ်ယောက်ရှိတယ်...ငယ်စဉ်ကတည်းက မောင်နှမလို သံယောဇဉ်တွေနဲ့ နေလာခဲ့ပြီး အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာ သူတို့နှစ်ယောက် ဘယ်လိုတွေ ပြောင်းလဲ သွားမလဲ ဆိုတာကတော့.....👉🏻👉🏻